အိုကေလင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
အုိုကေလင်း ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၃ စစ်ကြီးကဖြစ်ခဲ့တယ် အချစ်ရယ် အရွယ်ကောင်း ယောကျာ်း မိန်းမတွေ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ… စစ်တိုက်ထွက်ရာ… စစ်ကြီးကဖြစ်ခဲ့တယ် အချစ်ရယ် ပံျ့နှံ့နေတဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ် မြို့ကြီးများနောက်ခံ ငါတို့ဓါတ်ပုံများ တယ်လီဖုန်းထဲ...
ကာတွန်း အိုကေလင်း -ရှော့တ် ရှိတယ် မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း အိုကေလင်း – တပ်မတော်နေ့ ဂုဏ်ပြုကာတွန်း မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းအိုကေလင်း – ဆွမ်းတောင် တနပ်လျော့ခိုင်းမှဖြင့်ကွယ် … မတ် ၄၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း အိုကေလင်း – အရပ်ဝတ်တွေ ရှေ့ထုတ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း အိုကေလင်း – စစ်ပညာတော်သင်များ အရေးပါပုံ ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း အိုကေလင်း – အသက်လုပြီး ပြေးနေချိန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်း မရှိ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်လည်း မသိ ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts...
ကာတွန်း – အိုကေလင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း အိုကေလင်း – မြန်မာပြည်က ကွန်မြူနစ်လက်သစ်တွေကို ချေမှုန်းကြ ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းအိုကေလင်း – ပြည်သူတွေက ဆင်းရဲပြီး၊ တိုင်းပြည်က ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ ဒီလိုပါ … ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No...
ကာတွန်း အိုကေလင်း – အဆင့်ရှိတဲ့ နှိမ်နှင်းနည်း ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.